DF oo soo dhawaysay Heshiis ka dhacay Libya – news
DF oo soo dhawaysay Heshiis ka dhacay Libya
Wasaaradda Arrimaha dibada Soomaaliya ayaa sheegtay in danta Shacabka Libya ay ku jirto Midnimada iyo wadajirta loona baahan yahay in lasi waddo wadahadallada si ay u noqdaan kuwo guuleysta.
MUQDISHO, Soomaaliya - War qoraal ah oo kasoo baxay Maanta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska xabad-joojinta ee dalka Libya, kaasoo ay kala saxiixdeen dowladda Caalamka aqoonsan yahay iyo Mucaaradka uu hogaamiyo Jen Khalifa Xaftar.
"Dowladda Soomaaliya waxay si weyn u soo dhaweyneysa “is afgarad muhiim ah” oo ay ku dhawaaqday Dowladda Libya iyo Gollaha Wakiillada Agoosto 20, waa tallaabo sax ah oo wax ku ool ah oo loo qaaday jihada saxda ah," ayaa lagu yiri qoraalka.
DF ayaa ugu baaqday dhammaan qeybaha kala duwan ee Libya inay u hoggaansamaan, una fuliyaan qodobada heshiiska xabad-joojinta, kaasoo lagu lagu joojinayo dagaalka daba dheeraaday, sidoo kalena lagu soo celinayo midnimada iyo dowladnimada.
Libya, oo ku taalla gobolka Waqooyi ee Africa ayaa tan iyo markii la riday Col Qadaafi 2011 ka socday dagaal u dhaxeeya labo maamul oo Bariga iyo Galbeedka kala fadhiya, kuwaasoo ku loolamaya awoodda.
0 Comments Topics: farmaajo libya soomaaliya